Animatronics - uZigong waseHaiti Culture Co., Ltd
Ukongeza, uyilo ubeko, imihombiso izityalo kunye dino yokudlala isithembiso etc.is ekhoyo kwinkonzo yethu emva kwentengiso ......
Indlela Ukwakha i Dinosaurs Animatronic
Segesi Isakhiwo Steel of Animatronic Dinosaur
Senza uyilo ngoomatshini yonke idayinaso phambi kokuba imveliso ukwenza themhave isakhelo elungileyo nokuqinisekisa ukuba akwazi ukusebenza ngaphandle frictions, ukuze idayinaso babe nobomi inkonzo ende.
Connect Zonke Motors kwaye Umfanekiso, uburhabaxa Umsebenzi kwi High Foam
Ukuxinana High amagwebu ukuqinisekisa imodeli baqikelela ngakumbi. iinkosi nangokukrola Professional ube neminyaka engaphezu kwama-10 amava. ibonwe umzimba idayinaso Ogqibeleleyo ngokupheleleyo ngokusekelwe idayinaso skeleton kunye data yenzululwazi. Bonisa iindwendwe eziyinyani kunye Dinosaurs nempilo.
Sking-yokumilisela olubulala abicah
Ukupeyinta inkosi Ungayipeyinta iidayinaso ngokwemfuneko yoMthengi. Kwakhona idayinaso nganye iya kuba oluqhubekayo esebenza uvavanyo ngenye imini phambi ekuthuthweni.
Kugqityiwe Dinosaur Animatronic On Site